China Chlorinated Rubber (CR) mpanamboatra sy mpamatsy |Dehua
Ny fingotra chlorinated dia vokatra avy amin'ny fingotra ambany vita amin'ny fingotra voajanahary na fingotra synthetic amin'ny milina fangaro fingotra misokatra ary avy eo dia tena misy chlorinated mba ho lasa vokatra ovaina, izay ny fizotrany ara-teknika dia fikarohana sy novolavolain'ny orinasa tsy miankina, tsy mitovy amin'ny karbaona taloha. tetrachloride solvent fomba na ny rano dingana fomba.Amin'ny alalan'ny dingana ara-teknika, ny fanatanterahana ny adhesion sy ny hafanana fahamarinan-toerana dia mihatsara indrindra.
Ny fingotra chlorinated dia manana solubility lehibe amin'ny vahaolana methylbenzene sy xylene .Noho ny saturation ny firafitry ny molekiola miampy ny atôma klôro be dia be ao amin'ny rojo molekiola dia mahatonga ny fitaovana miaraka amin'ny toetran'ny sentetika. Ampiharo amin'ny sehatry ny coating indostrialy mifototra amin'ny asany toy ny solika. mahatohitra, Ozone fanoherana, simika fanoherana harafesiny sy ny afo retardenace.
Viscosité, Mpa.s (20% Xylene, 25 ℃) 5-11 12-24 Viscometer rotational
Ny votoatin'ny chlorine,% 62-72 62-72 Avy amin'ny Mercuric nitrate Volumetric
Thermal decomposition mari-pana ℃ ≥ 120 120 Afanaina amin'ny fandroana menaka
Hamandoana,% 0.2 0.2 Maina tsy tapaka mari-pana
Bika Aman 'endrika Vovoka fotsy Fijerena maso
Solubility Tsy misy akora tsy mety levona Fijerena maso
Stable amin'ny asidra sy alkali
Ny fanoherana ultraviolet
Miaraka amin'ny solubility lehibe amin'ny hydrocarbons aromatika, hydrocarbons aromatika chlorinated, ester Aliphatic, ketone zokiny.
Taorian'ny fiforonan'ny sarimihetsika, tsy vitan'ny hoe fahamarinan-toerana ara-tsimika ihany izy io, fa koa impermeability tsara amin'ny rano sy ny etona.
Izy io dia miaritra entona chlorine mando, CO2, SO2, H2S ary entona hafa isan-karazany (afa-tsy ny ozone mando na asidra acetic), ny hafanana tsara.
Tsy mihetsiketsika amin'ny asidra, alkalina na hafa amin'ny sira tsy ara-organika.
Izy io koa dia manana hery adhesive avo amin'ny tampon'ny vokatra vy sy simenitra., Ampiasaina betsaka amin'ny loko sy adhesive manokana manohitra ny harafesina.
Ny CR (fingotra chlorinated) dia vokatra simika madio tsy misy caron tetrachloride sisa tavela ary tsy misy fofona, tsy misy poizina, lelafo, maharitra ary tsy manimba ny vatan'olombelona.
teo aloha: Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC)
Manaraka: Polyethylene avo chlorinated (HCPE)